Ibhulogi - Amaphrinta welebuli yeWinpal athengisa ngokushisayo muva nje
Amaphrinta welebuli yeWinpal athengisa ngokushisayo muva nje
Iphrinta yelebula isho ukuthi ingahlela izinhlobonhlobo zamakhodi wombhalo namabha, bese iwadlulisela ngendlela yelebula. Lolu hlobo lwephrinta yelebula lusetshenziswa kakhulu ezindaweni eziningi, njengamanye amahhovisi, amafektri, izikhungo zokuphehla ugesi, izindawo zokugcina izimpahla, nezitolo ezinkulu lapho uvamise ukukubona khona.
Lolu hlobo lwephrinta yelebula lwehlukile kwamanye amaphrinta ejwayelekile welebuli abona amanani entengo edijithali. Izikhathi lapho kusetshenziswa khona le phrinta zizokwenziwa zifane ngokwengeziwe. Njengazo zonke izinhlobo zezitolo ezinkulu, ngithanda ukusebenzisa le phrinta. Okulandelayo kwethulwa kafushane izici zale phrinta nokuthi isetshenziswa kuphi.
Iphrinta yelebula isebenzisa kakhulu indlela yokuphrinta yokudlulisa eshisayo, engaphrinta ngokushesha amalebula, imvamisa enezinamathisela zokuziqinisa. Kukhona nezidingo zekhwalithi yalesi sitikha sokuzinamathisela ukuvimbela imihuzuko ekuthinteni ukucaciseleka kwekhodi yaso yebha.
Okwamanje, amaphrinta amalebula asetshenziswa ezikhathini eziningi, njengokukhiqizwa kwemboni, nokupakisha kwayo, ukumakwa kuyo nokufakwa ezinhlwini konke kuphrintwa yilolu hlobo lwephrinta. Ngaphezu kwalokho, ezinye izinxanxathela zezitolo zizosebenzisa lolu hlobo lwamalebula entengo yezimpahla, noma amalebula womkhiqizo, noma amalebula webhakhodi, kanye nezimpawu zezidakamizwa.
Isetshenziswa ngokukhethekile njengephrinta yelebula yebhakhodi ezitolo ezinkulu, futhi ikhwalithi nemisebenzi yayo mihle. Futhi kufanele azivumelanise nezimo ukuze akwazi ukuphrinta abahleli bemibhalo abahlukahlukene, kufaka phakathi ama-bar code. Ikakhulukazi iphepha layo lokuphrinta lihlukile ephepheni elijwayelekile lokuphrinta, linezimpawu zokungenwa ngamanzi, ukumelana nokugqwala kanye nokumelana nesimo sezulu. Ukuqina kungenye yezidingo zale lebula.
Eshibhile Irisidi Iphrinta, Iphrinta Yokuthola i-Wifi, Ucingo Irisidi Iphrinta, Iphrinta Yokuthola I-Thermal 80mm, Iphosta Yokuthola I-Pos, Iphrinta Yokuthola I-Thermal,